Lenovo – AsiaApps
Lenovo က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 5G smartphone company ဖြစ်လာမလား ????
August 3, 2018 August 3, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Lenovo က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 5G smartphone company ဖြစ်လာမလား ????
လာမည့် 5G network အတွက်ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မည့် smartphone company ကိုလူအများကစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့် လျက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် 5G စမတ်ဖုန်းအတွက် အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေကြပေမဲ့ အခုထိတော့ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 855 ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ 5G model…
ဒေါ်လာ၂၀၀အောက်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် Chinese brand Smartphone ၅ ခု
June 11, 2018 June 11, 2018 MoonFeaturesNo Comment on ဒေါ်လာ၂၀၀အောက်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် Chinese brand Smartphone ၅ ခု
အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ဒေါ်လာ၂၀၀ အောက် ၊ မြန်မာငွေ ၂သိန်းကျော်လောက်နဲ့ သုံးလို့ကောင်းမယ့် တရုတ်ဖုန်း ၅ ခု ကို မိတ်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ ဈေးတန်တန်လေးနဲ့ သုံးလို့ကောင်းမယ့်ဖုန်း အမျိုးအစားတွေကို ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဖတ်ကြည့်သွားသင့်ပါတယ်။ Xiaomi Redmi Note…
Lenovo Z5 မှာ all-screen display မပါဝင်လာ
June 6, 2018 June 6, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Lenovo Z5 မှာ all-screen display မပါဝင်လာ
Lenovo Z5 မှာ all-screen display ပါဝင်လာမယ်လို့ တရားဝင် မထုတ်ပြန်ထားပေမယ့် Lenovo ရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ weibo အကောင့်မှာတင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကြောင့် Z5 မှာ all-screen ဒီဇိုင်းပါဝင်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ထားတဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။…
ခုနောက်ပိုင်း smartphones ထုတ်လုပ်သူတွေ အများစုကို လေ့လာကြည့်ရသလောက် သူ့ထက်ငါအပြိုင် screen အရွယ်အစားကို ကြီးသထက်ကြီးလာအောင် ကြိုးစားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ( ဥပမာပြောရရင် iPhoneX ရဲ့ Notch ဒီဇိုင်း)။ သူတို့တွေထဲက Lenovo Z5 ရဲ့…